Waasiiro loo diiday in ay gudaha u gaalaan studium muqdisho iyo Farmaaj oo…… | Xaqiiqonews
Waasiiro loo diiday in ay gudaha u gaalaan studium muqdisho iyo Farmaaj oo……
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu soo fara geliyay is hortaag ay ciidamada AMISOM maanta wasiiro Dowlada ka tirsan iyo M/weynaha K/cagta Qaarada Afrika u diiday in ay galaan Stadium Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa amray in Wafdiga ay booqdaan Garoonka Kubadda Cagata ee Stadium Muqdisho waxaana uu Madaxweyanaha ka dalbaday Saraakiisha AMISOM in ay ogolaadaan In wafdiga ay gudaha ugalaan Garoonka.
Wafdiga Madaxweynaha Kubadda Cagta ee Qaarada Afrika iyo Wasiiradda ayaa hadda gudaha ugalay inkastoo saacado badan albaabka lagu celiyey.
iyadoo Amisom markii danbo ay fulisay dalabka madaxweynaha ee ahaa in wafdiga ay gudaha u galaan garoonka.
waxaa ciidamada Amisom ay horay ugu diidaan wasiirka Gargaarka Maryam qaasim in ay gasho garoonka diyaaradaha Aadna cadde wallow markii danbe ay cudur daar ka bixiyeen.